Foddaawwan Agarsisuu, Hidhuu fi Dhoksuu
Foddaawwan muraasni kanneen akka foddaa Naanna'aa LibreOffice keessaa ni hidhamu. Foddaawwan kana sochoosuu, hammamtaa isaanii jijjiiruu yookiin qarqaratti isaan hidhuu ni dandeessa.
Foddaawwan Hidhuu fi Hiikuu
Foddaa hidhuuf, kan armaan gadii keessaa tokko godhi:
Foddaa kabala mataduree isaatiin gara cinaatti harkisi, yookiin
Tooftaawwan kun foddaa amma hidhamee jiru hiikuufis fayyaduu ni danda'u.
Foddaawwan Hidhaman Agarsiisuu fi Dhoksuu
Foddaa hidhame agarsiisuuf yookiin dhoksuuf qabduu qarqara foddicha hidhamee irra jiru cuqaasi. Faankishiniin OfumaaDhoksaa foddaa dhokate qarqara isaa irratti cuqaasuudhaan yeroodhaaf agarsiisuuf sii eeyyama. Yommuu galmicha keessa cuqaastu, foddichi hidhame ammas ni dhokata.
Kamshaawwanii fi foddaawwan harkisanii kaa'uudhaan hidhuun qindaa'inoota taaligaa foddaa sirnaakee irratti hirkatu. Yommuu foddaa siiqsitu qabiyyeewwan foddaa guutummaatti agarsiisuuf sirnaakee dandeessisuu qabda, goodayyaa aloo qofa agarsiisuurra.
Title is: Foddaawwan Agarsisuu, Hidhuu fi Dhoksuu